भोलिबाट लकडाउन खुकुलो बनाउंदै गर्दा संक्रमणको आज आयो यस्तो अपडेट – Sandesh Press
भोलिबाट लकडाउन खुकुलो बनाउंदै गर्दा संक्रमणको आज आयो यस्तो अपडेट
June 21, 2021 323
काठमाडौं । पछिल्लो २४ घण्टामा थप २२९७ जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६ हजार ५८३ जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा १,५८४ र ४ हजार ३२१ जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा ७१३ जना गरी २२९७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । त्यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा भाइरस संक्रमणका कारण ४६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
नेपालमा हालसम्म ५ लाख ५९ हजार ९२८ जना संक्रमणमुक्त भइसकेका छन् । नेपालमा निको हुने दर ८९.९ प्रतिशत रहेको छ । हाल नेपालमा ५३ हजार ९४० जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् । यसमध्ये ५० हजार ३०४ जना होम आइसोलेसनमा, ३ हजार ६३६ जना संस्थागत आइसोलेसनमा, ८११ जना आईसीयू तथा २३७ जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन् ।
यही अवधिमा थप ४६ जनाले कोभिड–१९ को संक्रमणबाछ ज्यान गुमाएका छन् । हालसम्म नेपालमा ८ हजार ७७२ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । नेपालमा मृत्यु दर १.५ प्रतिशत रहेको छ ।
यसै क्रममा सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई थप खुकुलो बनाउँदै निजी सवारी साधन सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । उपत्यकास्थित तीन जिल्लाका सीडीओहरुको बैठकले निजी सवारी जोर–बिजोर प्रणालीमा चल्न दिने निर्णय गरेको हो ।
निजी गाडीमा यात्रा गर्दा बढीमा ४ जनालाई अनुमति दिइने ललितपुरका सीडीओ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिए । यस्तै, मोटरसाइकलमा दुई जनाले यात्रा गर्न सक्नेछन् । ट्याक्सीहरुलाई पनि जोर बिजोर अनुसार चल्न दिइने भएको छ ।
आइतबार, मंगलबार र बिहीबार ११ देखि ४ बजेसम्म सुन, भाँडाकुडा, अटो मोबाइल्स, विद्युतीय सामग्री खोल्न दिइने भएको छ । सोमबार, बुधबार र शुक्रबार ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म सपिङ मल, कपडा, जुत्ता, साडी, कस्मेटिक्स, फेन्सी टेलरिङ पसल खोल्न दिइनेछ।
खाद्यान्न, दूध, किताब पसललगायतका पसलहरू बिहान ११ बजेसम्ममात्र खोल्न दिइनेछ भने रेष्टुरेन्ट, होटलहरूले भने टेक अवे र होम डेलिभरी गर्न पाउने भएका छन् । हार्डवेयर पसलहरु दैनिक ११ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म खुल्न पाउने भएका छन् । शनिबार अत्यावश्यक बाहेकका पसलहरु खुल्न नपाउने भएका छन् । सरकारी र सार्वजनिक संस्थानका कार्यालयमा सीमित कर्मचारी राखेर मात्र संचालन गर्न अनुमति दिइएको छ ।
Prevसविता भण्डारी मृत्यु प्रकरण : आमा, बुबा र बहिनीले रुदै गरे यस्तो खुलासा , सबितालाई दोस्रो श्रीमती को रुपमा भित्राएका सविताको श्रीमानको पहिल्यै पनि बिबाह भै सकेको रहेछ (भिडियो)
Nextअमेरिकामा भया”नक दु’र्घटना, ९ बालबालिका सहित १० जनाको मृ’त्यु
कुन महिनामा जन्मिएको मानिसले कति धन कमाउछन ? कति सफल हुन्छन् जीवनमा हेर्नुस् !
चिसो तथा रुघाको लागि रामवाणकाे काम गर्छ प्याजले, यस्ताे छ प्रयोग गर्ने तरिका !
शाहरुखको छोरा आर्यनका लागि ऋतिक रोशनले लेखे यस्तो खुला पत्र
मोटरसाइकल र गाडीको ट्रायल दिनेहरुलाई खुसीको खवर, साउनदेखी लागु हुँदैछ यस्तो व्यवस्था
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (10466)
अन्तत प्रियंकाले दिइन् छोरीलाई जन्म? (10261)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (6261)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (6199)
भर्खरै सम्पूर्ण काठमाडौंबासीका लागि आयो अत्यन्तै खुसीको खबर। (5923)
सं’ क्रमित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य वि’ग्रिए पछि आ’ इसियुमा राखेर उ’ पचार सुरु (3228)
दुबई काण्ड: यी नेपाली युवतीको हेर्नै नसकिने भिडियो संसारभर भाइरल, आखिर किन यस्तो छाडा, रहर कि बाध्यता? (भिडियो सहित) (2460)
रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमण (2387)
केएमसी अस्पतालमा एकदिनको अन्तरालमै दम्पतिको मृत्यु, ६ वर्षीया छोरीको भावुक सन्देश! (2187)
क’ण्ड’ममा रातो खुर्सानीको चटनी प्रयोग गर्ने चलन तिव्र गतिमा फैलिँदै, डाक्टरहरूले दिए कडा चेतावनी
गयो शक्तिशाली भूकम्प, २६ जनाको मृत्यु
खोप नलगाएकाहरूका लागि ओमिक्रोन भाइरस यति धेरै खतरनाक, यस्ताे छ कारण